Ah, bras ara-panatanjahantena-na tianao izy ireo na tsy tianao. Raha tafiditra ao anatin'ny sokajy "mankahala azy ireo" ianao, dia vakio: Mety hanova ny sainao ity kitapo sarobidy ity. Mety tsy mahazo aina ny bra misy anao ankehitriny ary akaiky loatra ny hoditra, ka sarotra ny mihetsika mandritra ny c...
Tatitra feno momba ny tsenan'ny Socks Sports 2021 | Fironana, fitakiana fitomboana, fahafahana & vinavina ho an'ny 2027
nataon'ny admin tamin'ny 21-04-25
Ny fikarohana ara-panatanjahantena ara-panatanjahantena dia tatitra momba ny faharanitan-tsaina miaraka amin'ny ezaka feno handinihana ny vaovao marina sy sarobidy. Ny angon-drakitra nojerena dia natao amin'ny fandinihana ny roa tonta, ny mpilalao ambony efa misy ary ny mpifaninana ho avy. Paikady fandraharahana ataon'ireo mpilalao fototra sy ny...
Miantoka ny fiarovana ny vokatra sy ny mpiasa
nataon'ny admin tamin'ny 20-02-21
Hatramin'ny nisian'ny pnemonia coronavirus vaovao tany Shina, izahay UBUY dia mandray andraikitra mavitrika amin'ny asa fisorohana sy fanaraha-maso ny valan'aretina. Na dia tsy ao amin'ny faritra afovoany aza ny orinasanay, dia mbola raisinay ho zava-dehibe ihany izany. Ny 27 janoary lasa teo, nanangana ekipa miady amin'ny vonjy taitra sy hetsika izahay ary...